Mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee ku hadla afka Bluetooth ayaa ah qiimaha ugu hooseeya - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo Mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee lagu tijaabiyay Bluetooth ayaa ah qiimaha ugu hooseeya - BGR
Mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee lagu tijaabiyay Bluetooth ayaa ah qiimaha ugu hooseeya - BGR
Waxaan tijaabinay dad badan oo telefoonnada gacanta ah oo badan oo la adeegsan karo sannado badan, laakiin mar walba waxaan ku soo noqonnaa qaab. Tani waa 2.1 Nekteck NK-S1 Wada-hadalka Kumbuyuutarka ee Kumbuyuutarka ah . At 60 $ on Amazon, waxay u muuqataa xoogaa pricey marka la barbar dhigo qaar ka mid ah noocyada kale ee caanka ah ee suuqa. Si kastaba ha ahaatee, wax yar baadigooji, si kastaba ha ahaatee, waadna baran doontaa in hadalkaas kan weyni uu ku jiro darawallada xoogan ee 10W iyo sidoo kale subag la mid ah 10W oo leh laba dabeecad oo baaskiil ah. Natiijadu waa tayada maqalka ee cajiibka ah ee dhawaaqa weyn, laakiin waxaa lagu duubay weel la qaadan karo oo leh awood nololeed weyn, si sahlan loo qaado meel kasta. Xaqiiqdii waa gorgortan kudhisan 60 $, laakiin lambarka lacagta ee GTZIZ54K wuxuu hoos u dhigaa 35,99 $ waqti yar!
Waa kuwan qodobbada muhiimka ah ee bogga wax soo saarka:
waxqabadka dhawaaqa Gaarka ah: Bluetooth sameecada Nekteck bixisaa awood leh 20 watts awoodda. Waxaa la dhisay habka cajiib ah channels 2.1 yimaado la hadla 10W, subwoofer iyo 10W 2 hiitarka Bass masuuliyadii dhawaaqa tiyaatarka guriga run in is haysta iyo fududahay in la isticmaalo.
WARBIXIN TALAABOOYIN KOOXAHA CIIDAMADA: Ku hadlaani wuxuu la mid yahay Bluetooth 4.1 wuxuuna taageertaa heshiisyada A2DP, HSP, HFP, AVRCP. Waxay leedahay kala duwanaansho fara badan oo isku xira 10 m ama 33 cagaha. Waxa kale oo ay taageertaa dhegeysiga codka AUX dibadda si aad u heesi karto muusikada xiriirka wire.
6 Generation HVAC TECHNOLOGY: Tiknooloojiyada ugu dambaysa ee HVAC ka soo jeeda 6e ayaa leh qalab yareyn iyo dib u dhigista codka. Waxay bixisaa khibrad tayo sare leh.
GUDIIDAHA IYO BULSHADA: Waad ka yaabisaa nikotka Bluetooth Nekteck oo bixiya hababka muusikada ee 2 oo si fiican loogu habeeyey baahiyahaaga. Hel codka cad, cinwaanka markaad qolka ku jirto, ama kor u qaad bass iyo maqal maqal oo loogu talagalay dhammaan waxqabadka banaanka.
TIME PLAY DHEER: Ku raaxayso waqti 8 saacadood loo maqli karo leh batari dhafan 7,4 V 2 000 Mah, kaas oo u ogolaanaya in aad kor u ciyaaro si 160 songs bartamihii mugga-on hal dacwad. (Waqtigii ciyaarta ayaa kala duwan iyada oo ku xidhan heerka mugga iyo nuxurka audio).
Raac @BGRDeals on Twitter si aad u raacdo ugu dambeeyey iyo ugu xiisaha badan ee aan ka helnay webka.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan dalabyada la kafaalo-qaaday iyo deeqaha la kafaalo-qaaday, fadlan u soo dir email oo ay maalgelisay bb.com
Waxyaabaha ku jira BGR Deals waxay ka madaxbannaan yihiin Tifaftirka iyo Xayeysiinta, BGRna waxay heli karaan komishiin lagu iibsado daabacaadeena.
Philips 11 nalalka nacnac, 100 $ dhimis ku on iPads, Bose kulaylka, ka badan
Dhammaan dheriga ugu wanaagsan ee dhammaan dadka ayaa weli ku jira iibka qiimaha ugu wanaagsan tan iyo Black Friday - BGR